Author: Kajigrel Nikojinn
Dawladda waxaa waajib ku ah in ay taabbageliso tacliinta sare. Inuu sannad walba u gudbiyo Golaha Wakiillada warbixin ku aadan xisaab-xirka miisaaniyadda Dawladda ee sanadkii la soo dhaafay.
Xarumaha Maxkamadaha Rafcaanku waa magaalo-madaxyada Gobollada. Afarta xubnood ee Maxkamadda Dastuuriga ah ee laga soo xulay bulshada waxay dhammaan xuquuqda kala mid yihiin garsoorayaasha Maxkamadda Sare. Muwaaddin kasta puntlajd buuxiya shuruudaha doorashada wuxuu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto.
Garyaqaanka Guuud wuxuu talo sharci siiyaa Madaxtooyada iyo Golaha Wakiillada, markay uga baahdaan.
Designed by Dastuur,a Software. Qof kasta waxa uu u madaxbannaan yahay inuu dalka ka maro ama ka dego meel kasta oo uu rabo iyo inuu dalka ka baxo kuna puntlanc laabto goortii uu doono. Ku wacyi galinta dadweynaha iyo masuuliyiinta dawladda muhimadda ay leedahay dhowrista Xuquuqda Aadanaha ee ku cad Dastuurka iyo sharciyada Puntland, isla markaasna ku xusan Axdiyada iyo heshiisyada caalamiga ah. Eedeysane kasta waa in 48 saacadood gudahood xariggiisa maxkamadi ku xalaaleyso.
Madaxweynaha wuxuu saxiixayaa xeerarka iyo xeer-hoosaadyada by-lawshalka uu Wasiirku saxiixayo Amar-fulinta wasaaraddiisa. Puntland waxay taageereysaa in khilaafaadka caalamiga ah, kuwa cusub iyo kuwii hore u jireyba, lagu dhammeeyo wada hadal iyo hab nabadeed. Hoggaanka Golaha wakiilladu dasuturka si degdeg ah ugu gudbinayaa Madaxweynaha puntlsnd Dastuurka Puntland lagu sameeyay si uu u saxiixo faafinta rasmiga ahna loogu soo saaro.
La Dagaallanka musuqmaasuqa heer kasta oo maamulka Dawladda dhexdeeda ka jira. Maxkamada Sare waxay diyaarisaa habraacyada dacwadaha ka dhacaya dalka dibaddiisa iyo inay ogolaato habraaca lagu fulinayo dacwad ama xarig dembiile dal kale lagaga soo xukumay.
Maxamed Xasan Barre oo ku dhawaaqay natiijada ansixinta dastuurka ayaa sheegay in dastuurkan la ansixiyay uu u horseedayo Puntland in laga gudbo qaabkii beelaha ku saleysnaa oo loo gudbo qaab asxaab ku dhisan. Qofna lama faragelin karo waraaqihiisa boostada, xiriirkiisa isgaarsiineed iyo qoraalladiisa gaarka ah, marka laga reebo xaaladaha sharcigu banneeyo baaritaankooda, dabagalkooda, ama dhegaysigooda.
Wuxuu gudoomiyaa kulannada dastuufka isugu yimaadaan guddiyada tuulooyinka. Haddii ay Xukuumaddu dhacdo, Madaxweynuhu wuxuu bil gudaheed Golaha Wakiillada ku horgeynayaa Xukuumad cusub si loo ansaxiyo.
Sharciga lagu maamulo taxanaha shaqada career garsoorayaasha ayaa qeexaya shuruudaha laga rabo garsooraha 0212 derejada kowaad. Dastuurka aasaasiga ah ee carruurtu waa khasab, Dawladda ayaana u xilsaaran helitaanka agabka iyo hawlwadeennada waxbarshada. Puntland waxay soo dhaweeneysaa lana xaajooneysaa degmo iyo gobol kasta oo doonaya inuu ku soo biiro Dawladda Puntland.
Golaha Wakiilladu waxaa la gudboon in ay hal-abuurkaas ku qiimeeyaan kalfadhiga socda ama kan ku xiga, jawaabna siiyaan codsadayaasha.
Sharciga ayaa nidaaminaya qaabka ololaha axsaabta iyo musharixiinta, waana in uu sameeyaa xadiga tabarrucaadka la siin karo iyo tirada dastuurla lagu kharashgareenayo doorashada. Madaxweynaha, Madaxweyne ku-xigeenka, xubnaha Golaha Wasiirrada iyo saraakiisha sarsare ee Dawladda ma geli karaan ganacsi gaar ah inta ay dastuueka hayaan. Garsoorayaasha Maxkamadda Dastuuriga ah ee aan ka tirsanyn Maxkamadda sare waa inay buuxiyaan shuruudaha ku xusan qodobka 90aad ee Dastuurka.
Hoyga iyo meelaha kale ee la degganyahay waxay leeyihiin xurmayntooda. Shuruudaha uu Golaha Garsoorka u adeegsanayo shaqaalaynta garsoorayaasha iyo shaqaalaha kale waxaa lagu qeexayaa sharci gaar ah.
Maxkamadda Dastuuriga ahi waxay awood u leedahay inay buriso sharci kasta, xeer hoosaad ama xeer-fulineed Golaha Fulinta gebi ahaan ama qaybo ka mid ah, sababo la xiriira inuu Dastuurka khilaafsan yahay. Dhammaan dadweynaha Puntland waxaa waajib ku ah daryeelka iyo dhawridda hantida Dawladda. Madaxweynuhu wuxuu amraa, horana u mariyaa xiriirka caalamiga ah ee Puntland, wuxuuna ka xaajoodaa dabadeedna saxiixaa heshiisyada caalamiga ah.
Qaab-dhismeedka, Laamaha, xuduudaha awoodaha iyo xilgudashada Garsoorka waxaa xadidaya sharci ay Xukuumaddu horgeyso Golaha Wakiillada. Garsoorayaashu waa in aynan qaban hawlo ka horimanaya garsoornimadooda.
Gacan taagga waxaa lagu beddeli kara habka codaynta elektarooniga ah marka Goluhu yeesho. Sharci gaar ah ayaa kala xadidaya heerarka qiimayaasha kala sarreeya ee hanti kasta oo ay leedahay Dawladdu.
Madaxweynuhu wuxuu soo saaraa xeer by-law qeexaya in la fuliyo shuruucda Golaha Wakiilladu gudbiyeen. Isimada la aqoonsan yahay waa heerka ugu sarreeya hoggaamiye dhaqameedka. Punland waxay Dawladda Federaalka ee Soomaaliya ay la wadaageysaa Calanka guud ee Soomaaliya, Astaanka iyo Heesta Qaranka, iyadoo kuweeda u gaarka ahna leh. Sarkaal ama shaqaale kasta ee dawladeed oo si xun u maamula, lunsada lacag, hanti kale ee ummadeed ama ka qaybgala fal-dembiyeedyadaas, wuxuu geystay dembi culus, wuxuuna mudanayaa ciqaab u dhiganta faldembiyeedka uu galay sida uu qabo Xeerka Ciqaabta iyo inuu soo celiyo dhammaan hantidii uu dayacay ama lunsaday.